TV သို့သရုပ်ပြခြင်း - Chromecast, Roku, ဖုန်းကို TV APK သို့ Android သို့ကူးပြောင်းသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » တီဗီကာစ် - Chromecast ကို, Roku TV ကိုမှစီးဖုန်းကို
တီဗီကာစ် - Chromecast ကို, Roku TV က APK ကိုမှစီးဖုန်းကို
တီဗီကာစ်သငျသညျကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဖွ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ လူအပေါင်းတို့သည်ဒေသခံ ဗီဒီယိုများ, ဂီတ နှင့် ပုံရိပ်တွေ တီဗီရန်, Chromecast ကို, Roku အမေဇုံမီးသတ် Stick သို့မဟုတ်မီးသတ်တီဗီ, Xbox, Apple TV သို့မဟုတ်အခြားကို DLNA ကိရိယာများကို။ တီဗီကာစ်နှင့်ယခု TV ပေါ်မှာရုပ်ရှင်ပျော်မွေ့!
● တီဗီကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသော ဖုန်းဖြင့်: ခေတ္တနား, volume ရှေ့ဆက် / ပြန်ရစ်ယခင် / လာမည့်စသည်တို့ကို
●ရုပ်သံမှ Cast ကိုဗီဒီယိုများ။
● ပြည်တွင်းပြန်ဖွင့် ဗီဒီယိုများအတွက်။
ရရှိနိုင်သွန်း devices များ & streaming များစက်ပစ္စည်းအတွက်●အော်တိုရှာဖွေရေး။
●အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ device ကိုနဲ့ SD Card ကိုပေါ်ဗီဒီယို, အသံ, ဓါတ်ပုံကိုဖိုင်တွေဆန်းစစ်ပါ။
● Add ဒေသခံဗီဒီယို, ဒေသခံအသံဖိုင်မှ တန်းစီ Play.
●ရောသမမွှေ, ကွင်းဆက်, ထပ် mode မှာမီဒီယာ Play ။
●ဗီဒီယိုကိုသွန်းများအတွက်ဒီဇိုင်း, ဂီတသွန်း & ဓါတ်ပုံကိုဆလိုက်ရှိုးသွန်း.
တစျခုထဲမှာသို့ကာစ်📺All။ တီဗီမှ Cast ကိုနှင့်အတူသငျသညျမှနှငျထုတျနိုငျပါ:
☆ Chromecast ကို
☆စမတ်တီဗီ: စသည်တို့ကို Samsung, LG Sony က, Hisense Xiaomi သည်, Panasonic
☆, Xbox One နဲ့ Xbox 360
☆အမေဇုံမီးသတ် TV နဲ့မီးသတ် Stick မှ Cast ကို
☆ကို Apple TV နဲ့ Airplay
Roku, Roku Stick နဲ့ Roku တီဗီ☆
☆အခြားကို DLNA အသံဖမ်း
☆မကြာမီလာမည်: Kodi, IPTV စသည်တို့ကို
သငျသညျရုပ်သံဖို့ဟာ android မှဗီဒီယိုကိုနှင်ထုတ်ချင်လျှင်, သင်ပိုကောင်းတီဗီမှ Cast ကိုကြိုးစားပြီးချင်ပါတယ် - Chromecast ကို Cast သုံးရန်။
ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူပြီး Roku မှသွန်းလေ၏။ သငျသညျန့်အသတ်မရှိဘဲ Roku မှဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတကိုနှင်ထုတ်နိုင်။ အစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့နောက်သို့ဆုတ်သင်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ယခုပင် Roku ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံး website နှင့်သွန်းကနေဗီဒီယိုတွေကိုရှာဖွေ!
အလွယ်တကူမြန်ဆန်ဖုန်းမှ Chromecast ကိုမှဒေသခံဗီဒီယို, ဓါတ်ပုံကိုဆလိုက်ရှိုးနှင့်တေးဂီတကိုသွန်းလေ၏။ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ Chromecast ကို, မီးသတ်တီဗီနှင့်အခြားသောစမတ်တီဗီမှသွန်းလေ၏။ Chromecast ကိုမှချလျက်, ဗီဒီယိုကြည့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။
အဆိုပါ AirPlay function ကိုနှင့်အတူ Apple ကတီဗီမှဒေသခံဖိုင်များကိုနှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများနှစ်ဦးစလုံးကိုသွန်းလေ၏။ ဗီဒီယိုတိုးတက်မှုနဲ့ volume ကိုထိန်းညှိဖို့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ Apple ကတီဗီမှသွန်းလေ၏။
ဖုန်း မှစ. တီဗီမှ stream
တီဗီမှ Cast ကိုနှင့်အတူသငျသညျန့်အသတ်မရှိဘဲဖုန်းမှရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်နိုင်ပါ။ ဒါဟာစသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့စမတ်တီဗီ, Chromecast ကို, အမေဇုံမီးသတ် Stick မှဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံများ, သငျသညျချက်ချင်းရုပ်ရှင် stream ကိုကူညီပေးပါ
ဖုန်းမှရုပ်သံမှ stream ကို Wi-Fi ကွန်ရက်နှင့် streaming များစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအလွန်မှီခိုသည်။ သင့်ဖုန်းနှင့် streaming များ device ကိုအတူတူပင်ကို Wi-Fi ကိုအတူချိတ်ဆက်ကြောင်းသေချာပါစေ။ နှင့်မီဒီယာများ၏ format နဲ့ device ကို streaming ကထောက်ခံသည်။ သငျသညျ Chromecast ကိုမှရုပ်သံသို့မဟုတ်သွန်းမှစီးဆင်းသည့်အခါသငျသညျကိုဒုက္ခရှိပါကသင်သည် Wi-Fi ကို router ကိုနှင့် streaming များ device ကို reboot ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ XCast အကြောင်းကိုမဆိုအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ပြဿနာများရှိပါက videostudio.feedback@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
★ပံ့ပိုးမှု LG ကများတွင် We-OS! 🖥
★ရှေ့ဆက် / ပြန်ရစ်အချိန်ကြားကာလ Adjust! 😍
တီဗီကာစ် - Chromecast ကို, Roku TV ကိုမှစီးဖုန်းကို
8.99 ကို MB
+ က်ဘ်ဗီဒီယိုများ ... သို့ကာစ်
T-Cast TCL စမတ် ...